Puntland oo gargaar u direysa gobol bilo go’doonsan – Hornafrik Media Network
Puntland oo gargaar u direysa gobol bilo go’doonsan
By Liibaan Nuur	 On Dec 22, 2019
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Karaash iyo wefdi uu hoggaaminayo oo sida shixnado gurmad ah, ayaa maanta safar dhanka cirka ah ku tegaya magaalada Caluula ee gobolka go’doonsan ee Gardafuu.
Diyaaradda qaadaysa madaxweyne ku xigeenka iyo wefdigiisa, ayaa markii u horraysay ka degi doota garoon macmal ah oo laga sameeyay magaalada Caluula, kadib markii ay waddooyinka bur-buriyeen daadad ka dhashay roobabkii deyrta ee dalka ka da’ay.
Dhamaan degmooyinka kala duwan ee gobolka ay Puntland u bixisay Gardafuu ayaa go’doonsan, kadib markii roobab mahiigaan ah ay ka da’een gobolkaas iyo gabi ahaan gobolada uu ka arimiyo maamulka Puntland, iyadoo meelaha qaarna ay ku dhufteen dabeylo ka dhashay roobkaas.
Bulshada ku dhaqan degmada Caluula ayaa gacantooda ku samaystay, garoon macmal ah oo si ku meel gaar ah diyaaraduhu u adeegsan karaan, si ay u helaan meelo loo soo mariyo gurmadka ay u baahan yihiin.
Madaxweyne ku xigeenka iyo wefdigiisa ayaa sida ay qorsheysay xukuumaddu waxay halkaas gaarsii doonaan gurmad ka kooban noocyada kala duwan ee raashinka, dawooyin, dhar iyo agabyo kale oo loogu tala galay in loogu gurmado qoysaska ku go’doonsan gobolkaas.
Wadahadallo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo Somaliland oo ka bilaawday Muqdisho
Locust invasion threatens Somali farmers with starvation, Reuters